Imikhiqizo Yokufundisa Ngamazinyo Abakhiqizi - China Imikhiqizo Yokufundisa Ngamazinyo Ifektri kanye nabaphakeli
Uhlelo lwevidiyo yamazinyo wokufundisa ngamazinyo
Idizayini yobungcweti yeMfundo Yokufundisa Ngamazinyo noma Ukwelashwa
Idizayini yekhibhodi efihliwe, elula ukuhlehlisa, ayihlali esikhaleni somtholampilo.
Ukudluliswa kwevidiyo nesikhathi somsindo.
Ukubukwa kokuqapha okubili kunika odokotela nabahlengikazi amapulatifomu wokusebenza ahlukene nama-engeli ahlukene, angakhathalela inqubo yokufundisa ngomtholampilo.
Uhlelo lokuqoqwa kwamavidiyo kwezokwelapha, ukukhishwa kwevidiyo i-1080P HD, ukusondeza okubonakalayo okungama-30, kunikela ngemifanekiso emincane yevidiyo yokufundisa ngomtholampilo.
Ikhwalithi ephezulu yokuFundisa amaDental Simulator yokuzijwayeza ukuqeqeshwa kwamazinyo i-JPS-FT-III
Uhlelo lokulingisa lwamazinyo lwe-JPS FT-III yakhelwe futhi yathuthukiswa ngokukhethekile ekufundiseni amazinyo yi-JPS Dental.
Ekugcineni ilingisa ukusebenza kwangempela komtholampilo ukuze abafundi bamazinyo nabasebenzi bezokwelapha bakwazi ukuthuthukisa ukuma okulungile kokusebenza nokukhohlisa ngaphambi kokuhlinzwa komtholampilo futhi benze ushintsho olubushelelezi ekwelashweni kwangempela kwemitholampilo.
Ukulingiswa kokufundisa kwamazinyo kufanelana nesikhungo samazinyo nesikhungo sokuqeqesha amazinyo.
Uhlobo Lomnotho Simulator Yokufundisa Ngamazinyo JM-580
I-1set light light engenamakhaza yokusebenza
Isihlalo somhlangano wamazinyo esilinganisiwe 1unit
Uhlelo lwe-filtrastion lwamanzi 1set
I-3-way syringe 1pc
Isihlalo samazinyo 1pc